musha / Interior design / Deconstructionism, Yakachena Space YeRusununguko Uye Spontaneity
2021 / 08 / 13 kupatsanuraInterior design 4930 0
Iyi i 115㎡ L-yakavakwa imba muTaiwan Province, ine vana vaviri vanogara mairi. Muridzi wacho aisada kuzadza imba izvozvi nekuti vana vachiri vadiki, uye vaida kuchengeta zvimwe zvinowirirana zveramangwana. Imba yekutanga ine mamwe matanda ekare mukati, uye mwenje hauna kupenya zvakanyanya. Muridzi akaripira mugadziri Ming-Hui Cheng weBug Idea kugadzirisa imba yavo.
Iyo yekutanga pasi chirongwa inoratidza kuti marongero haana kunaka. Mukoridho wakareba uye wakamanikana, saka nzvimbo inova yakareba uye yakasviba. Chekutanga, dhizaini akabvisa zvidimbu zvemukati uye akarongazve mitsara mitatu inofamba.
Dhizaini yemukamuri inoenderana nepfungwa ye "L-yakaumbwa partition" uye "mbiri mutsara".
Chimiro chakaita saL chakakamurwa kuita mabhuroko maviri: imba yekutandarira yakavhurika uye yekudyira + nzvimbo yekubikira pazasi / kamuri iri pamusoro ndiyo imba inoda kuvanzika.
▲ Kurongwa Kwepasi
Kubva kuhurongwa hwese hwepasi, mugadziri akaedza kushayisa simba zvikanganiso zvepakutanga murefu nzira. Akabatanidza mabhuroko ekumusoro neepasi nebhuruu rebhuruu. Iri bhuruu yebhuruu haingori chete yekupinda mukamuri, asi zvakare inosanganisa imba yekuchengetera uye nzvimbo yekuchengetera. Panzvimbo pekuvanza musuwo uye madziro, panguva ino "musuwo" unoratidzwa nechavara chivara, uchiushandura kuita chinonakidza chinja nzvimbo.
Iyo yepamusoro tenzi yekurara inopatsanurwa kubva kuimba yevana nemusuwo unotsvedza. Musuwo unotsvedza unovhurwa panguva dzakajairwa, zvekuti unozova muhombe gadziriso yemakamuri. Izvi zviri nyore kwavari kuti vatambe kana kurara pamwe chete.
▲ Vhoriyamu yebhuruu iri pakati inobatanidza nzvimbo dzekumusoro nedzakadzika.
Maonero kubva pamusuwo wepamberi kusvika mukati, nzvimbo yese zvakare ine yakachena uye yakapusa toni. Iyo yebhuruu nzvimbo iri pakati inzvimbo yeshanduko inobatanidza iyo yeruzhinji uye yakavanzika matunhu. Iyo kicheni uye yekudyira iri kuruboshwe, uye imba yekutandarira iri kurudyi. Iko kuchengetedza uye kuchengetedza zvese zvakavanzwa. Kuseri kwesofa kune imba yekuchengetera yese. Iyo TV kabhodhi yakavanzwawo mumadziro. Nzira yekufamba nepahwindo yakabatana nekamuri yevana.
Iyo pasi inogadzirwa ne micro sement. Padivi renzvimbo yekudyira, bhokisi dema rinoshandiswa kusanganisa piyano, inotonhorera waini uye makabati ekuchengetedza. Nenzira iyi iyo yekuchengetera haizotarisike kunge yakazara.
Iyo yepakati chitsuwa chakabatanidzwa netafura yekudyira, zvine hungwaru uchishandisa izvo zvinopindirana zvinhu zvehuwandu uye bhodhi. Iyo pasi inosvika kune iyo tafura uye inosanganisirwa nemabhokisi kuti vagadzire yakagadziriswa nzvimbo yepachitsuwa tafura, ichigadzira imwe nzira yekuishandisa. Iyo inopisa nzvimbo yekutsva mukicheni inoiswa mukona, kuitira kuti pasave nekudikanwa kwekuwedzera yakakosha yekutsvedza musuwo, uye inogona kuchengetwa zvishoma yakavhurika.
Aya matatu mavara e grey, nhema uye huni akapindirana. Nhema ndiyo nzvimbo yekuchengetera michina. Iyo grey ndeye pamusoro petafura, iyo inogona zvakare kuwedzerwa kugadzirirwa yekuwedzera.
Iyo bhuruu paseji pakati penzvimbo yekutandarira uye yekurara nzvimbo. Rimwe divi imba yekuchengetera, uye rimwe divi ikabati repfuti yemutambo wekupona kwemurume uyu. Ndinovimba muridzi achawana shanduko yemanzwiro kana achipfuura nepano shanduko nzvimbo.
Iyo yekutanga irregular façade newindo. Mugadziri akaisanganisa neyakavharwa nehuni uye akaishandura ikaita mukova nekubuda mukamuri revana. Izvi zvinogadzira mukana wekubatana uye kugadzirisa dambudziko renzira refu. Iyo block kubva kuimba yekutandarira kuenda kuimba yevana yakagadzirirwa kuve nzvimbo yekufundira vana mune ramangwana.
Kunyangwe imba yevana yava imba huru imwe chete, yakachengeterwawo kuti ipatsanurwe mumakamuri evana maviri mune ramangwana. Izvi zvinogutsa zvizere muridzi wemba chishuwo chekuita zvakasiyana muhupenyu.
Zvekuronga kwazvino kamuri yevana, mugadziri akashandisa mubhedha wemubhedha (uyu mubhedha unogona kukatanurwa mumibhedha miviri isina kumbobvira mune ramangwana), saka kuronga kwacho kwakagadzirawo hurongwa hwepasi kumisikidza makore mashanu gare gare.
Iyo tenzi yekurara yakabatana nekamuri yevana nemusuwo unotsvedza. Sezvo varidzi vedzimba vachipedza yakawanda yenguva yavo nevana vavo, kurara pamwe chete kana kutamba pamwe chete, zvakakosha kuti ubatanidze imba yevana nenzira iyi, uye vatengi vazhinji mazuvano vane izvo zvinodiwa.
Imba yekurara huru ine madhoo maviri anotsvedza, rimwe divi imba yekupfekedza uye tenzi yekugezera, uye rimwe divi rakabatana nekamuri revana.
▲ Iwo maonero eiyo tenzi yekurara yakanangana neimba yekutandarira
Maonero eiyo tenzi yekurara akatarisa kuimba yekutandarira, rakadzika bhuruu bhokisi rinounza mifungo kune imwe nzvimbo.
Iyo yepamusoro yemusoro weiyo tenzi yekurara inosvika kuimba yekupfeka, uye imba yekupfekedza kabhineti inomhanya nepabhavhu rekugezera pamusoro, ichitarisira kugadzira pfungwa yekuona kuwedzerwa mukati nekunze.
Iyo tenzi yekugezera iri kumagumo eimba yekupfeka. Hupamhi hwetambo-imwe nzvimbo haina kukodzera. Asi mushure mekumisikidza nzvimbo dzinoshanda, inoshanda mushe mukushandisa uye nemaziso.
Iyo yekugezera nzvimbo yeruzhinji imba yekugezera inopatsanurwa nemamineral pendi. Rudzi runodziya rweyero rinoratidza kudziya uye kugamuchira muridzi.
Pakapfuura :: "Nguva Yekusarudza", Iyo Piyona Clubhouse Pasi Pemifananidzo Zvinyorwa | JK Lien Dhizaini Zvadaro: 155㎡Circular Space, Zvizvarwa Zvitatu Kugara Pamwe Pasina Generation Gap - Rikyu Dhizaini
2021 / 08 / 15 5266
2021 / 08 / 15 5836
2021 / 08 / 15 5597
2021 / 08 / 14 5902
2021 / 08 / 14 5092